Menstruation – Healthy Life Journal
ရာသီလာချိန် အမျိုးသမီးတို့ ရင်ဆိုင်ရတတ်သည့် ပြဿနာများ
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ရာသီလာတာနဲ့ ပတ်သက်ရင် အမျိုးသမီးတွေက မျိုးစုံသောပြဿနာတွေ ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ – ရာသီလာရင် ဆီးစပ်ပေါင်လယ်ကနေ ဆွဲဆုပ် လိုက်သလို ကိုက်ခဲနေတတ်တယ်၊ – ခါးကိုက်တတ်တယ်၊ – အိပ်ရာထဲမှာ ပုဇွန်တုပ်လေးလို ဒူးနဲ့ ဗိုက်နဲ့ ထိနေအောင်...
မေး။ ။ အပျိုပါရှင့်။ အလိုလိုနေရင်း ရာသီမလာလို့ပါ။ ပြောရရင် သုံးလလောက်ရှိနေပါပြီ။ နှင်းဖွေး (FB) ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ ရာသီခွင်တစ်ခုဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် လစဉ်လစဉ် ၂၈ ရက်မှာ တစ်ခါ ရာသီလာလေ့ရှိတယ်လို့...
ရာသီလာချိန် နာကျင်မှုသက်သာအောင် . . .
မေး. ရာသီလာတာ ဗိုက်အောင့်တယ်။ ခြေ၊ လက်အေးတယ်။ ပြီးတော့ ချွေးစိမ့်ထွက်တယ်။ ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ။ မဖြစ်အောင် ဘာလုပ်သင့်လဲ။ ဆေးနည်းလေးပြောပြပါလား။ Jay Chou (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ရာသီလာချိန်မှာ ကိုက်ခဲနာကျင်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သဘာဝပါ။ နာကျင်တာသက်သာအောင်...